🥇 ▷ Telefishanka qarsoon ee Huawei oo leh Kirin 990 ee cusub ayaa laga diiwaangeliyay Geekbench ✅
Telefishanka qarsoon ee Huawei oo leh Kirin 990 ee cusub ayaa laga diiwaangeliyay Geekbench
The Kirin 990 Kani waa chipset-ka ugu dambeeyay ee waxqabadka sareeya. Shirkadaha Shiinaha ayaa si rasmi ah uga bilaabay IFA sannadkan, kaasoo dhammaaday maalmo ka hor.
Geekbench wuxuu u horseeday inuu sameeyo tijaabooyin iyo buundooyin marino aan la garaneyn. Lama oga waxa wicitaankan loogu yeeri doono, laakiin waxaa suuragal ah in tani ay tahay mid ka mid ah calanka soo socda ee loo diyaar garoobayo dhamaadka sanadkan. Si loo caddeeyo oo si toos ah loogu sheego waxa barxada tijaabadu ka muuqato keydka macluumaadka taleefanka gacantan, waxaan ku daabacnaa liiska hoose…
The Huawei NLE-AL00 Tani waxay la shaqeysaa howl wadeyaasha HiSilicon oo leh soo noqnoqda aasaasiga ah ee 196 GHz. Munaasabadda IFA 2019 ee ka dhacday Berlin, Jarmalka, Huawei wuxuu ku dhawaaqay Kats 990 iyo Kirin 990 5G chipsets. Daabacaadda 5G ayaa leh laba Cortex-A76 cores oo socodsiiya 2.86 GHz, laba Cortex-A76 cores oo socodsiinaya 2.36 GHz, iyo afar Cortex-A55 cores oo socodsiiya 1.95 GHz. Dhanka kale, nooca joogtada ah ee ‘chipset’ wuxuu leeyahay labo ‘Cortex cores-A76’ oo la arkay. celcelis ahaan 2A 86 GHz, labada korantada Cortex-A76 waxaa lagu habeeyay 2.9 GHz iyo afar Cortex-A55 cores ah 186 GHz. Sidaa darteed, waxaa la qiyaasayaa in Huawei NLE-AL00 ee uu Geekbebench na tusay waxaa awood u leh nooca aan ahayn 5G ee Kirin 990
Huawei NLE-AL00 oo leh Kirin 990 dhanka Geekbench
Qalabkani wuxuu noqon karaa telefoon lagu kalsoonaan karo oo la imaan karo maxaa yeelay wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka hawlgalka ee Android 10. Dhawaan, Kirin 990 chipset, oo ay tahay in lagu caawiyo 8GB RAM, sida aad ka arki karto liiska. Tijaabinta aaladda Geekbench core waxay kasbatay NLE-AL00 3,842 dhibcood, dhanka kale waxay duubtay 11,644 dhibic laba buundo. Wali lama go’aamin haddii “NLE-AL00” uu yahay Huawei ama Honoon astaan ​​casri ah.